The Ab Presents Nepal » ‘जात्रै जात्रा’ को चौतर्फी चर्चा, हाउसफूल ओपनिङ!
‘जात्रै जात्रा’ को चौतर्फी चर्चा, हाउसफूल ओपनिङ!
काठमाडौं –:शुक्रवारदेखि प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘जात्रै जात्रा’ ले शुक्रवार र शनिवार उत्साहित व्यापार गरेको छ । यो चलचित्रले मल्टिप्लेक्स र सिङ्गल थिएटरका हलमा आक्रामक व्यापार गरेको हो ।
प्रदीप भट्टराईले निर्देशन गरेको यो फिल्ममा विपिन कार्की, रविन्द्र झा, रविन्द्रसिंह बानियाँ, वर्षा राउत, दयाहाङ राई लगायतका कलाकारको शीर्ष भूमिका छ । चलचित्रमा भेटिएको सुन लुकाउन तीन पात्रले गर्ने कसरतलाई कथानक बनाइएको छ ।
शनिवार राजधानीका मल्टिप्लेक्स हलमा यो फिल्म हाउसफूल भएको थियो । सिङ्गल थिएटरमा पनि दर्शकको उत्तिकै उपस्थिति देखिएको थियो । फिल्मका निर्देशक प्रदीप भट्टराईले चलचित्रबाट दर्शकको अपेक्षित साथ पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे । यस्तै चलचित्रमा शीर्ष भूमिका निभाएका विपिन कार्कीले आफूले अपेक्षा गरेभन्दा बढी माया पाएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘चलचित्रका कलाकार राजधानीका हलमा दर्शकसँग साक्षात्कारका लागि पुगेका थिए । कमेडी जानरामा निर्माण भएको यो फिल्मले समीक्षात्मक रुपमा पनि उत्तिकै तारिफ पाएको छ । चलचित्रलाई फिल्म हेरेका दर्शकले पनि मन पराएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ‘।